Darpan Nepal – पुरुषका पीडाः बोलौँ भने इज्जतको डर, नबोलौँ भने ऐय्या आत्था !
पुरुषका पीडाः बोलौँ भने इज्जतको डर, नबोलौँ भने ऐय्या आत्था !
May 12, 2018adminLiterature0Like
केही समयअघि एकजना भाईले फोन ग¥यो । भाई र बुहारी करिब २ बर्षदेखि अलग भएर बसेका रहेछन् । उनीहरुका एक जना बच्चा पनि छ । बच्चासहित माइती बस्न थालेकी श्रीमतीलाई लिन पटक पटक जाँदा पनि घर आउन नमानेपछि ती भाई अहिले छटपटाईरहेका छन् । ‘जति लिन गए पनि मसँग आउदिन भन्छिन् अनि डिभोर्स पनि नदिने भन्छिन्, अब मैले के गर्दा हुन्छ दाजु?’ यो समस्याको समाधान हुने आश राखेर मलाई फोन गरेको रहेछन् तर मैले उसको पीडा च्वाट्टै निको हुने सल्लाह दिन सकिन किनकी यो उसको मात्रै समस्या नभएर धेरैको पीडा भएको छ । यस्तो अवस्थामा चार वटा बिकल्प मैले देखेको थिए । पहिलो सम्झाई बुझाई सम्बन्ध सुधार गर्ने, दोश्रो सम्झाई बुझाई डिभोर्स दिन लगाउने, तेश्रो स्थानीय तहदेखि नै डिभोर्सको पहल थाल्ने र चौथो जे पर्ला पर्ला भनेर अर्काे घरवार गर्ने । यसमध्ये पहिलो र दोश्रो बिकल्प फेल खायो भने त्यो पुरुषले कहिल्यै सुखभोग गर्न पाउदैन । किनकी नेपालमा पुरुषले डिभोर्स दिने नियम छैन र स्थानीय निकायबाट थालिएको कदम पनि एकदमै झण्झटिलो असम्भवप्राय रहेको छ ।
केही समयअघि राष्ट्रिय अखबारमा एउटा घटना सार्वजनिक भयो । घटना अनुसार एक महिलाले विभिन्न जिल्लामा बिबाह गर्दै सम्पत्तीजति आप्mनो नाममा रखेको । यो घटनाले एकातिर सरकारी नीति नियम र सरकारी कार्यालयहरुको समन्वयलाई गिज्याएको छ भने अर्काेतिर महिलालाई दिएको अधिकारको महिलाहरुद्धारानै चरम दुरुपयोग भएको देखिन्छ । विभिन्न तरिकाले सम्पत्तीकै लागि बिवाहको नाटक गरेर पुरुषमाथि अन्याय भईरहेका घटना धेरैनै देखिन थालेको छ ।
एक सामाजिक संस्थामा केही बर्ष अगाडि एउटा घटना घट्यो । भर्खरै संस्थाको अध्यक्षमा बिजयी एक पुरुषलाई सोही संस्थामा कार्यरत एक युवतीले ‘सेक्सुयल ह्यारेसमेन्ट’ गरेको आरोप लगाएपछि ति पुरुषले राजिनामा नै दिनुपर्यो । भएको के रहेछ भने भर्खर संस्थामा आएकी एक युवती उनीसँग विभिन्न किसिमले नजिकिइन् । पुरुषको मन न हो, महिला अघि सरेपछि अलि आकर्षित हुनु स्वभाविक नै थियो । बच्चा र संगित मननपराउने मान्छे तथा युवतीप्रति आकर्षित नहुने पुरुष हुँदैनन् ।
उनीहरुको फेसबुक च्याट हेर्दा युवतीलेविभिन्न प्रकारले पुरुषलाई आफुतर्फ आकर्षित गरेको देखिन्छ । पुरुषलाई आकर्षितगर्न उनले जे जति गर्नुपर्ने हो ती युवतीले सबै काम गरेकी थिईन् । सामिप्यता बढाउने क्रममा उनले नाइट शो फिल्म हेर्न जाने प्रस्ताव राखिन् । उनैलेटिकेटको ब्यवस्था समेत गरिन् । युवतीको नाटकीय मायाजाल र उनले गर्ने द्धिअर्थि कुराकानीले गर्दा नै ति पुरुषले एक दिन उनलाई शारिरिक सम्बन्धको प्रस्ताव समेत गरे । उनको यो प्रस्ताव यतिधेरै महंगो बन्यो कि ति पुरुषको जीवनमा कहिल्यै नमेटिने दाग भयो । यही प्रस्तावलाई आधार बनाएर युवतीले आफूलाई ‘सेक्सुयल ह्यारेस्मेन्ट’ गरेको आरोप लगाइन् । जबकी पुरुषको यो प्रस्ताव आउनुमा उसको नाटकीय प्रेम गतिविधि नै मुख्य कारक रहेको थियो । तर संस्थाका अन्य कर्मचारीहरुले आँखा चिप्लेर युवतीलाई नै साथ दिए र पुरुष एक्लिए ।
आफ्नो काम प्रति सक्रिय पुरुषलाई नशालु नजर लगाउँदा, नाइट शो फिल्म हेर्ने प्रस्ताव गर्दा, द्धिअर्थि भाषा बोल्दा, ‘केटा जस्तै छैन तपाई त’ भनेर होच्याउँदा, पुरुषलाई मन परी छुँदा सेक्सुयल ह्यारेसमेन्ट नहुने पुरुष अघि सर्दा चाँही सेक्सुयल ह्यारेसमेन्ट हुने ?
केही साताअघि महिला हिंसा सम्बन्धी एउटा घटनाले नेपाली समाजमा तरंग ल्यायो । आफूलाई कुटेको भन्दै एक उपमेयरले श्रीमान्लाई पक्राउ गराइन् । केही दिनपछि मिलापत्र गरेरश्रीमन् छुटे । स्थानीय निकायको न्यायधिश सरह मानिने उपमेयरले यस्तो कदम चाल्नु एकदमै वाहवाहीको बिषय भयो । किनकी राम्रो कुराको सुरुआत आफैबाट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै उनले आप्mनै घरबाट महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्न पहल थालिन् ।
उक्त घटनालाई कानूनी दायरामा ल्याउनु अघि मिडिया मार्फत् यो घटनाले ब्यापक प्रचार पायो । यो घटनाले अब उनको अघिल्लो पुस्तादेखि पछिल्लो पुस्तासम्मलाई असर पार्न सक्छ । कहिलेकाही राम्रै कदम पनि ब्यवहारिक जीवनमा नराम्रो भैदिन्छ ।श्रीमान्श्रीमतीको झगडा जहाँबाट सुरुभए पनि कि बेडरुममा पुगेर वा अदालतको बेन्चबाट अन्त्य गर्नुपर्छ । आखिर मिलापत्र गरेर सँगै बस्नु नै छ भने बेकारमा दुनियाँका अगाडि किन एकले अर्कालाई बेइज्जत गर्नु । सकेसम्म ठाउँको ठाउँ, नसके बेड, त्यो पनि नसके सपरिवार, त्यो पनि नसके घर र माइती पक्ष बसेर निर्णय गर्नुपर्र्छ । जब एकपटक दुनियाँले थाहा पाउने गरी झगडा हुन्छ भने त्यसपछिका सम्बन्धहरु थप बिग्रिदै जान्छन् । श्रीमान्श्रीमतीको सम्बन्ध भनेको छिमेकीसँगको जस्तो होईन ।
श्रीमान् गाँउ गएको मौका छोपेर श्रीमतीले फेसबुकको ब्वाईफ्रेण्डलाई रात बस्ने गरेर बोलाउछिन् । यो कुरा केटाको भिनाजूले थाहा पाएपछि प्रहरी बोलाएर घेरा हालेर उनीहरुलाई कोठा भित्रवाट पक्राउ गर्छन् । यो घटना प्रहरीको पुगेपछि केटाले आफु उक्त महिलासंग अलग बस्ने सोचाई राख्छन् । तर कानूनी जटिलताले गर्दा केटाले भन्दा पनि केटीले मात्र डिर्भोस गर्न पाउछन् । यस्तो अवस्थामा केटी डिर्भोस गर्ने मनसायमा छैनन् भने केटा उनलाई श्रीमतीको रुपमा स्विकार गर्ने मनस्थितीमा पनि छैनन् । यो अवस्था आएपछि दुबै जना अलग भएका छन् तर कानूनी रुपमा उनीहरु अझैं पनि श्रीमान् र श्रीमतीको रुपमा रहेका छन् ।यस्ता अनेकन घटना र परि घटनाहरु अहिले नेपाली समाजमा देखापर्न थालेको छ । विभिन्न किसिमले महिलाद्धारा पीडित भएका पुरुषहरुको ब्यथा कहालीलाग्दो छ ।युवतीले देखाएको जवानीको नशामा ¥याल चुहाउदा युवाहरु झमेलामा पर्ने किसिमका घटना त सामान्य जस्तै बन्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समय महिला पुरुष बराबरीको नारा एकदमै चलेको छ र यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो । विगतमा जसरी पुरुषहरुले शोषण गरे त्यो एकदमै अत्याचारपूर्ण र निन्दनिय थियो । त्यसकारण पछिल्लो समय महिला अधिकारका कानूनहरुलाई अलि ब्यापक बनाइयो । अधिकार भन्ने कुरा सबैलाई बराबर हुनुपर्ने हो तर यहाँ पुरुषलाई अत्याचार हुने गरी महिलालाई अधिकार दिइएको छ । यसरी अधिकार दिनुसम्म गलत नहोला तर यहाँ त ति अधिकारलाई टेकेरै दुरुपयोग समेत हुन थालेको छ । जस्तै महिलाले मात्रै डिभोर्स गर्न पाउने ब्यवस्थाले कैयौ पुरुषहरुको बेहाल स्थिती छ । यसबारे पुरुषले मात्रै होईन शिक्षित महिलाहरुले समेत आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
अलिकति भावनात्मक कुराले पनि पुरुषहरु पीडित छन् । महिला भनेपछि आँखा चिप्लेर समर्थन गर्ने बानीले पनि कतिपय अवस्थामा गलत संस्कारको जन्म भैरहेको छ । बाटोमा एक महिलाले अर्काे पुरुषलाई कुटिरहेको देख्यौ भने हामी चुपचाप रमिता हेर्छाै र सोच्छौ ‘पक्कै पुरुषले केही गल्ती गरेको होला’ भनेर । तर यसको ठिक उल्टो कोही पुरुषले महिलालाई कुटिरहेको देख्यौ भने पुरुषमाथि नै जाई लाग्छौ । आखिर त्यहाँ महिलाले नै गल्ती गरेको किन नहोस् । पुरुषले महिला कुट्नु गलत हो र झगडा छुट्याउनु हाम्रो दायित्व पनि हो तर कुरै नबुझी पुरुषलाई भकुर्नु चाहि अन्याय भएन र ?
अझ सबैभन्दा बिकराल रुप लिएको छ ‘मन मिल्दा मोजमस्ती, नमिल्दा जबरजस्ती’ । अचेल फस्टाएको लिभिङ टुगेदर प्रवृतिको सिकार पुरुषहरु भएका छन् । मन मिल्दा र भने जस्तो गरेसम्म सँगै बसेर मोजमस्तीमा रमाउने, जब पैसा सकिन्छ र आफुले भनेका कुराहरु पुरा हुन पाउदैनन् । अनि बलात्कारको अभियोगको जन्म हुन्छ । हाम्रो समाजले पनि महिलाको बोलीलाई भगवानको बोली ठान्छन् र उनकै समर्थनमा लाग्छन् ।
अझै पनि हाम्रो समाजमा चेतनाको स्तर कमि छ । चेतना नै नभएको ठाउँमा महिला हिंसा बिकराल रुपमारहेको छ भने अर्ध चेतनशिल समाजमा पुरुष हिंसा बढ्दो छ । महिला र पुरुष कोही पनि हिंसामा पर्नु हुन्न भन्ने धारणा राख्ने ब्यक्तिहरुको संख्या ज्यादैनै न्यून रहेको छ ।
यो सबै हुनुको पछाडि एउटै कारण हो, महिला र पुरुषलाई आकाश र जमिनको फरक भनेर सोच्ने मानसिकता । हाड, मासु, छाला, नङ, कपाल आदि इत्यादि उही उस्तै हो भने संसार श्रृष्टीका लागि दिइएको एउटा अंगका कारण यसरी भयंकर फरक ठान्ने हाम्रो मानसिकता नै गलत देखिन्छ । कसैको छोरी नै तपाईकोे श्रीमती हो र तपाईको छोरी पनि कसैको श्रीमती हो । कसैको बहिनी तपाईको गर्लफ्रेण्ड हो भने तपाईको बहिनी पनि त कसैको गर्लफ्रेण्ड हो । आप्mनो बहिनीलाई अरुले हेर्याे भने झगडा गर्न तम्सिनेले अरुको बहिनीलाई गर्लफ्रेन्ड भन्दै जबर्जस्ती अंगाल्ने हाल्ने नैतिक अधिकार कहाँबाट आयो ?
छोराले भनेको हरेक कुरा बुहारीले स्विकारोस् भन्नेले ज्वाईले भनेको हरेक कुरा छोरीले पनि स्विकारोस् भन्न सक्छ ? यदि त्यसो भन्न सक्दैन भने छोरा र बुहारी, ज्वाई र छोरी बराबर भन्ने सोच्न जरुरी छ ।
आफ्नो ..ची पनि अमृत अरुको अमृत पनि ..ची सोच्ने हाम्रो दिमाख खराब हो । जब समाजकै दिमाग खराब हुन्छ अनि त्यहाँ गलत अभ्यास सुरु हुन्छ र समाज उल्टो दिशातिर उन्मुख हुन्छ । जोसुकैले गरोस् गलत गलत नै हो भन्ने मानसिकता नरहेसम्म समाज सुध्रिदैन । पुरुषबादी सोचको सिकार महिला मात्रै होईन पुरुष पनि बनिरहेका छन् । यही सोचका कारण पुरुषहरु आफूमाथि भएको हिंसा खुलेर सार्वजनिक गर्न सक्दैनन् । समाजले धिक्कार्लान भन्ने डरले उनीहरु जतिसुकै पीडा भए पनि सहेर बस्न बाध्य छन् ।
अतः रोग लागेर मर्नु भन्दा पनि रोग लाग्न दिनु घातक हो त्यसैले रोगको लक्षण देख्ने बित्तिकै उपचार थाल्नुपर्छ । यो लेखको आशय केही घटना प्रस्तुत गरेर समग्र जननीप्रति आपत्ती जनाएको हुँदै होईन । जो आप्mनो जवानी र अधिकारको दुरुपयोग गरेर अरुलाई बिनागल्ती सजाँयको भागीदार बनाईरहेका छन, उनीहरुलाई मात्रै समपर्ण गरिएको हो । गलत गर्नु गल्ती हो तर गल्ती गर्न उक्साउनु महागल्ती हो । प्रकृतिले आपूmलाई राम्रो बन्न दिएको सुन्दर रुपलाई दुरुपयोग गरेर कुरुप बन्नेहरुदेखि चनाखो हुन जरुरी छ ।महिलाले रुप र अधिकारको दुरुपयोग गर्ने तथा पुरुषले जैविक गुण र पाखुराको दुरुपयोग गर्ने हो भने समाज भडखालोतिर जान्छ ।कसैले तपाईलाई केही राम्रो कुरा दिन्छ भने त्यो केवल सदुपयोगका लागि मात्रै दिएको हुन्छ । दुरुपयोगको भागिदार तपाई स्वयं बन्नुपर्छ ।
Previous Postरातभरी भिजाएको एक चम्चा मेथीदानाले चट पार्छ ग्यास्ट्रिक!! Next Postझापाकी युवती गोरखामा मृत फेला, ब्वाइफ्रेन्ड प्रहरी नियन्त्रणमा